ပန်ဒိုရာ: အိုင်အိုဝါရက်စွဲများ အပိုင်း (၄)
အိုင်အိုဝါရက်စွဲများ အပိုင်း (၄)
၁၁။ လူငယ်များအတွက် တီထွင်ဖန်တီး စာရေးသားခြင်း သင်တန်း
Face to Face Creative Writing for Youths လို့ အမည်ရတဲ့ “လူငယ်များအတွက် တီထွင်ဖန်တီး စာရေးသားခြင်း” သင်တန်းတိုတွေမှာ လုပ်အားပေးနိုင်သူတွေကို IWP က ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အစီအစဉ်ကတော့ IWP နဲ့ the Iowa Youth Writing Project (IYWP) တို့ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IWP စာရေးဆရာတွေအတွက် မဖြစ်မနေ ပါဝင်ရမယ့် အစီအစဉ်မဟုတ်ပေမယ့် သူတို့ဆီမှာ ကလေးတွေကို သင်ကြားတဲ့ creative writing ကို သိချင်တာရယ်၊ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်မှာ လူမှုရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီချင်တာရယ်ကြောင့် စာရင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မူလတန်းကနေ အထက်တန်းအရွယ်အထိ ကလေးတွေအတွက် ဒီသင်တန်း အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာ IYWP က ဦးဆောင် စီစဉ်သူတွေဖြစ်တဲ့ ဒိုရာ (Dora Malech)၊ ကက်သရင်း (Catherine Blauvelt)၊ ဖာတီမာ (Fatima Espiritu) တို့ဟာ IWP က စိတ်ပါဝင်စားသူ စာရေးဆရာတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကြပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ခရီးအဖြစ် အိုင်အိုဝါပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် ဒီမွိုင်း (Des Moines) ကို စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက် စနေနေ့မှာ သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ IWP စာရေးဆရာတွေထဲက စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် နယူးဇီလန်က ဂျက်ဖရီ ၊ ဖိလစ်ပိုင်က ဂျင်းန်ဗီးလ်၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်က အလီနာ၊ မောရိသျှက ဘာလင် နဲ့အတူ ကျွန်မလည်း လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။
ပြည်နယ်မြို့တော် ဒီမွိုင်းဟာ အိုင်အိုဝါမြို့နဲ့ သိပ်မဝေးလှပါဘူး။
မြို့တော်ဆိုပေမယ့်လည်း အေးဆေးငြိမ်သက်တဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ပါ။ သင်တန်းကို ပူးပေါင်းစီစဉ်သူဖြစ်တဲ့ Monsoon Bayanihan Asian Resource Centre တည်ရှိရာကို ရောက်လာတဲ့အခါ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ကို အဲဒီရုံးရဲ့ တာဝန်ခံ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး အမျိုးသမီးက ဆီးကြိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ Monsoon ဟာ လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အန်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေကို အကြမ်းဖက်မှုက ကာကွယ်တာ၊ ကလေးသူငယ်တွေကို စောင့်ရှောက်တာ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ရုံးခန်း အနှံ့အပြားကို တာဝန်ခံက လိုက်ပြပါတယ်။ အခန်းတွေမှာ ပြင်ဆင်ထားပုံက ကျွန်မရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားပါတယ်။ နံရံမှာရော မျက်နှာကြက်တွေမှာပါ ဆေးရောင်စုံ စိုစိုလက်လက်တွေ ခြယ်သထားပြီး အရုပ်တွေလည်း ရေးခြစ်ထားပါတယ်။ အခန်းတွေရဲ့ အပြင်အဆင်က ကလေးငယ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်မယ့် ပုံစံမျိုးပါ။ စာသင်ခန်းမထဲမှာ ကပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံစုံက ပိုစတာတွေကို အမှတ်မထင် ကြည့်လိုက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပိုစတာတစ်ခုကို သွားတွေ့ပါတယ်။ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကို ဂုဏ်ပြုရေးဆွဲထားတဲ့ ပိုစတာပါ။
(Monsoon စာသင်ခန်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ ၈၈၈၈ ပိုစတာ)
မကြာခင်မှာပဲ ကလေးတွေနဲ့ မိဘတချို့ရောက်လာကြပါတယ်။ သင်တန်းလာတက်ကြတဲ့ ကလေးတွေဟာ အရွယ်စုံလင်သလို လူမျိုးလည်း စုံလင်ပါတယ်။ ကျွန်မ မှတ်မိသလောက် ထိုင်း၊ ဂျပန်၊ လာအို၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ အာဖရိကတိုက်က ကလေး အများအပြားကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ဟာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အမေရိကကို ပြောင်းရွှေ့လာကြသူတွေပါ။ တချို့ကတော့ ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ မိဘတွေကနေ အမေရိကမှာ အခြေချရင်း မွေးဖွားလာကြသူတွေပါ။
(ဒီမွိုင်းမြို့ တီထွင်ဖန်တီး စာရေးသားခြင်း သင်တန်း)
ဒီသင်တန်းက ကလေးတွေကို တီထွင်ဖန်တီးချင်တဲ့ စိတ်ကူးဥာဏ်ပေါ်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ သင်တန်းသာဖြစ်ပြီး ရေးနည်းရေးဟန်တွေကို ကျောင်းသင်ခန်းစာဆန်ဆန် သင်ကြားပေးခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ လက်ရာတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဖြစ်ရမယ်လို့ ကန့်သတ်ထားခြင်းလည်း မရှိပါဘူး။ ခေါင်းစဉ်ကို သူတို့ စဉ်းစားလို့ရအောင် ကူညီတဲ့အနေနဲ့ ပေးထားပေမယ့် သူတို့နှစ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ရေးသားဖန်တီးခဲ့ရင်လည်း ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ တချို့က ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်အတိုင်း အက်ဆေး ရေးကြပါတယ်။ တချို့ကလည်း ကဗျာရေးပါတယ်။ တချို့ကလည်း ခေါင်းစဉ်ကို မလိုက်နာဘဲ သူတို့ ခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့ ဝတ္ထု၊ ပုံပြင်တွေ ချရေးကြပါတယ်။
ကလေးတွေကို တစ်ခုခု ဖန်တီးရေးသားချင်စိတ်ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အထဲမှာ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
· ကလေးတွေ အဓိက ရေးသားရမယ့် ခေါင်းစဉ်ကို “Identity” လို့ ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို ရေးဖို့အတွက် သူတို့ကို စဉ်းစားစရာလေးတွေပေးပါတယ်။
· ကိုယ့်နာမည်ဟာ ဘာအဓိပ္ပာယ်ကို ဆောင်သလဲ ဆိုတာကို သူတို့ကို စဉ်းစားခိုင်းပါတယ်။ နာမည် နဲ့ ပတ်သက်လို့ တခြားကလေးတွေနဲ့ စာရေးဆရာတွေ ရေးထားခဲ့တဲ့ အက်ဆေး ကဗျာတွေကို နမူနာအဖြစ် အားကျလာအောင် ဖတ်ပြပါတယ်။
· ကျွန်တော်/ကျွန်မဟာ အရင်တုန်းကတော့….. ဒါပေမယ့် အခုတော့…. (I used to be…. But now I am…) အဲဒီလို အစချီတဲ့ ဝါကျလေးတွေ တည်ဆောက်ခိုင်းပါတယ်။
· ကျွန်တော်/ကျွန်မ သတိရမိသေးတယ်… (I remember…. ) လို့ အစချီတဲ့ စာကြောင်းလေးတွေ ရေးခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီအတွက် နမူနာကိုတော့ Joe Brainard ရဲ့ I remember စာအုပ်ထဲက စာကြောင်းတချို့ကို ဖတ်ပြပါတယ်။
· ကလေးတွေကို အက်ဆေး၊ကဗျာ တစ်ခုခု ချရေးခိုင်းပါတယ်။ ရေးတဲ့နေရာမှာ အုပ်စုခွဲလိုက်ပါတယ်။ သင်တန်းမှာ ကူညီသူတွေက လူခွဲပြီး အုပ်စုတွေကို ဦးဆောင်တာဝန်ယူပေးရပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းကို အကဲခတ်ပြီး လိုရင်လိုသလို အတူတကွ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ကူညီပေးပါတယ်။
သင်တန်းမှာ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်ခဲ့ရတာ တစ်ခုကတော့ အလီနာရဲ့ ကူညီမှုပါ။ ဥဇဘက်ကစ္စတန်က အလီနာ ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်လစ် စာရေးဆရာမလေးဟာ IWP စာရေးဆရာ အားလုံးထဲမှာ အငယ်ဆုံးပါ။ အသက် ၂၃ နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ အလီနာဟာ ရုရှရေမြေမှာ မွေးဖွားသူလေးပီပီ ဒစ္စနေကာတွန်းထဲက မင်းသမီးလေးတွေလို မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေနဲ့ ထင်းနေအောင် အလွန်လှပသူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို တွေ့တဲ့ ကလေးတိုင်းဟာ (အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးငယ်လေးတွေဟာ) အရမ်းသဘောကျကြပါတယ်။ သူ့အသားလေးကို ကိုင်ကြည့်ပြီး မင်းကဘာကြောင့် ဒီလောက်လှနိုင်ရတာလဲ လို့မေးသူကလည်း မေးပါတယ်။
သင်တန်းမှာ သိသိသာသာ အေးဆေးငြိမ်သက်တဲ့ ကလေးမလေး တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူက အိန္ဒိယက ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာသူလေးပါ။ မျက်မှန်လည်း အထူကြီးနဲ့ မျက်စိအားအတော်နည်းပြီး လက်ရေးကိုလည်း ညီညာအောင် မနည်းထိန်းရေးရပါတယ်။ ခေါင်းကို ငုံ့ထားပြီး စကားလည်း မပြောသလောက်ပါပဲ။ အက်ဆေးရေးကြတဲ့အခါ သူဟာ ဘာရေးရမှန်း အိုင်ဒီယာ မထွက်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ရေးသမျှကလည်း သဒ္ဒါအမှားအယွင်းတွေနဲ့ ဘာသာစကားလည်း အတော်အားနည်းရှာပါတယ်။ အလီနာက သူ့အနားမှာ ထိုင်ပေးတဲ့အခါ သူ တော်တော် အားတက်သွားပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်မှာ မသိမသာနဲ့ အလီနာက သူ့ကို မေးခွန်းလေးတွေ မေးပေးပါတယ်။ အလီနာမေးတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေလိုက် စဉ်းစားလိုက်နဲ့ သူဟာ နောက်ဆုံးတော့ တကယ်ကို လှပတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ကို ရေးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းပြီးသွားတော့ အတန်းရှေ့မှာ သူတို့လက်ရာတွေကို ထွက်ပြီး ဖတ်ပြကြတဲ့အထဲမှာလည်း အဲဒီ ကလေးမလေးဟာ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ သူ့ဇာတ်လမ်းလေးကို ခပ်တည်တည် ဖတ်ပြသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ်မှတ်မှတ်ရရ ရေးသားချက်တစ်ခုကတော့ ထိုင်းလူမျိုးနဲ့ လာအိုလူမျိုး အထက်တန်း ကျောင်းသားလေး နှစ်ယောက် စုပေါင်းရေးကြတဲ့ ကဗျာပါ။ “အထက်တန်းကျောင်း” လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ စာကြောင်းလေးတွေကို အစကတော့ ကဗျာလို့ပဲ ထင်မိတာပါ။ အတန်းရှေ့မှာ ထွက်ပြီး ရွတ်ပြတဲ့အခါ ဟစ်ပ်ဟော့ သီချင်းဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ယောက်က စာသားတွေရွတ် တစ်ယောက်က ပါးစပ်ဆိုင်းနဲ့ သီဆိုပြသွားတာ အံ့သြစရာစွမ်းရည်တွေပါပဲ။ ဂျပန်မလေး တစ်ယောက်ကတော့ ပုံပဲဆွဲချင်တယ် စာတွေ မရေးချင်ဘူး ဆိုပြီး identity ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ကာတွန်းကွက်လေးတွေ ဆွဲပြခဲ့ပါတယ်။
(ဟစ်ပ်ဟော့ သီချင်း ဆိုပြနေတဲ့ ထိုင်းကျောင်းသားလေးနဲ့ လာအိုကျောင်းသားလေး)
(သူဆွဲထားတဲ့ ကာတွန်းတွေကို ပြနေတဲ့ ဂျပန်ကျောင်းသူလေး)
ဒီကလေးတွေရဲ့ နောက်ခံကို ကျွန်မတို့ သေသေချာချာမသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ သူတို့ထဲက တချို့ရဲ့ နောက်ခံဇာတ်ကြောင်းတွေမှာ သိပ်မလှပတဲ့ အကြောင်းတွေလည်း ပါဝင်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ ဥပမာ - တချို့ဟာ နယ်စပ်ကနေ ခိုလှုံလာတဲ့ ဒုက္ခသည်လေးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အာရုံဝင်စားပြီး စိတ်ကူးတွေ ညှစ်ထုတ်တဲ့အခါ မလိမ်ညာတတ်တဲ့ ကလေးတွေပီပီ စိတ်ထဲမှာ တကယ်ရှိတာတွေကို ချရေးတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အတိတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရေးတဲ့အခါ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ အရေးအသားတချို့ကို တွေ့ရပါတယ်။ ကလေးမလေး တစ်ယောက်ကတော့ သူ့ကို လူတိုင်းကမုန်းတယ်။ ဘယ်သူမှမချစ်ကြဘူး၊ သူကလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး စသည်ဖြင့် ရေးနေတာကို တွေ့တဲ့အတွက် သူ့အနားမှာ ထိုင်ပေးပြီး တခြားမေးခွန်းတွေကို အာရုံပြောင်းအောင် မေးပေးရပါတယ်။
အဲဒီ သင်တန်းအပြီး နောက်ထပ်နေရာတွေကို မသွားခင်မှာတော့ အခုလို ငယ်စဉ်ဘဝက ဝမ်းနည်းစရာ၊ မမှတ်မိချင်စရာ အဖြစ်အပျက်တွေ ကြုံတွေ့နိုင်မယ့် ကလေးတွေ၊ လူနည်းစု လူမျိုးနွယ် ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးတွေကြုံလာခဲ့ရင် ပိုသတိထားပြီး သူတို့အတွက် စိတ်ခံစားမှု မကောင်းစေမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို ရှောင်ရှားကြဖို့ ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့မှာ နောက်ထပ် သွားရောက်ခဲ့တဲ့ မြို့ကတော့ အိုင်အိုဝါ ပြည်နယ်ထဲကပဲ စပစ်ရစ် လိပ်ခ် (Spirit Lake) ဆိုတဲ့ မြို့ပါ။ အဲဒီမြို့ဟာ IWP ရဲ့ coordinator ဂျိုး (Joseph Tiefenthaler) ရဲ့ ဇာတိမြို့လေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာကတော့ အိုင်အိုဝါမြို့ကနေ အတော်လေး အလှမ်းဝေးတာမို့ ညအိပ်ညနေ သွားခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ သင်တန်းမှာ ကူညီဖို့ လိုက်ပါလာကြတဲ့ IWP စာရေးဆရာတွေက အီရတ်က ဂူလာလာ၊ ချီလီက မာတီးရားစ်၊ ဘော့စဝါနာက တီဂျေ၊ နေဘုန်းလတ်နဲ့ ကျွန်မ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
သွားတဲ့ လမ်းတလျှောက်မှာ ပြောင်းဖူးခင်းတွေကို တမျှော်တခေါ် မြင်နေရပါတယ်။ မြို့အဝင်နားမှာတော့ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်တဲ့ လေရဟတ် (windmill) တွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ မရှိတဲ့အရာတွေပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ တီဂျေက “ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကို သတိရလိုက်တာ” လို့ ကောက်ခါငင်ကာ ပြောပါတယ်။ သူက စာအုပ် နာမည်ကို မေ့နေပါတယ် ။ “ဟို.. ဒွန်.. ဒွန်နဲ့စတယ်လေ” တဲ့။ ဒွန်ရယ် လေရဟတ်ရယ် ဆက်စပ်ပြီး ကျွန်မလည်း ချက်ချင်း သိလိုက်ပါတယ်။ “စပိန် စာရေးဆရာ ဆာဗန်းတေးစ်ရဲ့ ဒွန်ကီရောတေး (Don Quixote) မဟုတ်လား” ဆိုတော့ သူက ဝမ်းသာအားရ ခေါင်းညိတ်ပါတယ်။
(စပစ်ရစ်လိပ်ခ် မြို့အဝင်မှ လေရဟတ်များ)
မြို့အဝင်မှာ ဂျိုးရဲ့အမေအိမ်ကို ခဏဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျိုးရဲ့ အမေက ကျွန်မတို့အတွက် ညစာ ချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ အဲဒီနေရာဟာ အိုင်အိုဝါမြို့နဲ့စာရင် သိသိသာသာ အေးလှပါတယ်။ ညစာစားပြီးတဲ့အခါ ကျွန်မတို့အတွက် မီးပုံပွဲလည်း လုပ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီနောက် တည်းခိုနေထိုင်ရမယ့် မြို့ထဲ ရေကန်အနားက လှပတဲ့ ဘန်ဂလိုတွေဆီကို ရောက်လာပါတယ်။ ဘန်ဂလိုနားက ရေကန်ဟာ နွေရာသီမှာဆိုရင် အပန်းဖြေသူတွေနဲ့ စည်ကားနေတယ် လို့ ဂျိုးက ပြောပြပါတယ်။ ခရီးပန်းလာလို့ တချို့က နားကြပေမယ့် ကျွန်မနဲ့ စာရေးဆရာတချို့ဟာ ဂျိုးနဲ့အတူ ရေကန်ရှုခင်းကို ညမှောင်မှောင်မှာ သွားကြည့်ရင်း လေညင်းခံကြပါသေးတယ်။
စပစ်ရစ် လိပ်ခ် မှာ သင်တန်းတက်ဖို့ ရောက်လာကြတဲ့ ကလေးတွေကတော့ ဒီမွိုင်းမှာလောက် မများပြားပါဘူး။ အဲဒီကလေးတွေကတော့ အမေရိကန် မြို့ခံလေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုပြီး ယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ သွက်လက်ကြတာကို သတိထားမိပါတယ်။ အဲဒီ သင်တန်းကျောင်းမှာကတော့ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေ စုံလင်ပါတယ်။ ကျောင်းက ကျယ်ဝန်းပြီး ပန်းချီပြခန်းလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီသင်တန်းမှာတော့ ကလေးအရေအတွက် နည်းပြီး ကျွန်မတို့က လူများနေတဲ့အတွက် ­­­­­ကလေးတွေ အနေခက်မှာစိုးလို့ စာသင်နေတုန်း ဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်တာကို သိပ် မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။ သင်တန်းပြီးမှသာ သူတို့နဲ့ စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီသင်တန်းမှာတော့ အချိန်လည်းရတဲ့အတွက် ကဗျာရွတ်ဆိုမှုမှာ အထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ တီဂျေဒီးမားက သူတို့ရေးထားတဲ့ စာတွေကို ပရိသတ်ရှေ့မှာ အသံထွက် ရွတ်ဆိုတဲ့အခါ ဘယ်လိုဟန်ပန်နဲ့ အသံနေအသံထား ပီပြင်အောင် ရွတ်ဆိုရမယ် ဆိုတဲ့ အခြေခံ အချက်ကလေးတွေကို သင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ ကလေးတွေကလည်း သူတို့စိတ်တိုင်းကျ လေ့ကျင့်ပြီးမှ သူတို့ရေးထားတာလေးတွေကို သေသေချာချာ ရွတ်ဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို သင်တန်းတွေကို အပတ်စဉ်တိုင်း တခြားမြို့တွေမှာလည်း လှည့်လည်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မက အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့မြို့ ၂ မြို့ကို လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသင်တန်းတွေအားလုံးမှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ လက်ရာတွေကို စုစည်းပြီးတဲ့အခါ The Iowa Youth Writing Project က စာအုပ်တစ်အုပ် ထုတ်ဝေပေးမှာပါ။
(စပစ်ရစ်လိပ်ခ်မြိှု့ တီထွင်ဖန်တီး စာရေးသားခြင်းသင်တန်း)
(စပစ်ရစ်လိပ်ခ်မြို့ တီထွင်ဖန်တီး စာရေးသားခြင်းသင်တန်း)
ဒီလို ရက်တိုသင်တန်းလေးတွေကို ကျွန်မတို့ဆီမှာလည်း စာရေးဆရာတွေက ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်လံဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ် လို့ တွေးမိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေမှာသာ ရရှိနိုင်တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတန်းပြင်ပ ပညာရေးကို သင်ယူခွင့် မရနိုင်တဲ့ နွမ်းပါးတဲ့ ဒေသက အစိုးရကျောင်းတွေ၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး ကျောင်းတွေမှာ ချိတ်ဆက်ပြီး သင်ကြားနိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာကတော့ ဒီလိုသင်တဲ့နေရာမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပညာရေးစနစ်ဟောင်းမှာ အရိုးစွဲလာခဲ့တဲ့ ဆရာကသာ တဖက်သက် ပို့ချသင်ကြား လိုတဲ့ အလေ့အထကိုတော့ ဖျောက်ပစ်လိုက်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကလေးတွေကို ဘယ်လို သင်ကြားပေးလိုက်မယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆရာသဖွယ် သဘောထားလို့ မရပါဘူး။ ကလေးတွေမှာ ပင်ကိုယ်သဘာဝအားဖြင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေ အံ့မခန်းရှိပါတယ်။ ကလေးတို့ရဲ့ သန့်စင်တဲ့ စိတ်ကူးဥာဏ်မှာ အကန့်အသတ်မရှိပါဘူ။ အဲဒါတွေကို ဖန်တီးမှုရလာဒ်အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာအောင် လူကြီးတွေက လှုံ့ဆော်ပေးမယ့်၊ အားပေးတိုက်တွန်းမယ့် အခန်းကဏ္ဍက ဖြည့်စွက်ပါဝင်ဖို့သာ လိုအပ်ပါတယ်။
၁၂။ Spirit Lake ရဲ့ စာအုပ်ဆိုင်က ဝတ္ထု/ကဗျာရွတ်ပွဲ နဲ့ ရေကန်ထဲမှာ လှေစီးကြခြင်း
စပစ်ရစ်လိပ်ခ် ကို ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်မှာ စာပေဖတ်ပွဲတစ်ပွဲ ကျင်းပဖို့လည်း ဂျိုးက စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ IWP မှာ အိုင်အိုဝါမြို့က စာပေရွတ်ပွဲ အနည်းဆုံး တစ်ပွဲဟာ IWP စာရေးဆရာတွေ မဖြစ်မနေ ပါဝင်ဆင်နွှဲရမယ့် အစီအစဉ်တွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ အဲဒီ ရွတ်ပွဲတွေမှာ ကျွန်မရဲ့ အလှည့် မကျသေးတာမို့ အခု စပစ်ရစ်လိပ်ခ် မှာ ရွတ်ဆိုတဲ့ပွဲဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ အမေရိကမှာ ပထမဆုံး ကဗျာရွတ်ရမယ့် ပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ သင်တန်းကို လိုက်ပါလာကြတဲ့ စာရေးဆရာတွေအားလုံးဖြစ်တဲ့ ဂူလာလာ၊ မာတီးရားစ်၊ တီဂျေ၊ နေဘုန်းလတ်နဲ့ ကျွန်မတို့ အားလုံး ရွတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ မာတီးရားစ် ကတော့ ဝတ္ထုရေးဆရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ဝတ္ထုရှည်တစ်ပုဒ်ရဲ့ ကောက်နုတ်ထားတဲ့ စာသားတွေကို ဖတ်ပြပါတယ်။ ကျန်သူတွေအားလုံးက ကဗျာရွတ်ကြပါတယ်။ စာအုပ်ဆိုင်ထဲမှာ လာရောက်ကြည့်ရှု အားပေးကြသူတွေဟာ မြို့ခံ အရပ်သူအရပ်သားတွေပါ။ သက်လတ်ပိုင်းနဲ့ သက်ကြီးပိုင်းတွေ ပိုများတာကို သတိထားမိပါတယ်။
လမ်းမကြီးရဲ့ ဘေးမှာ တည်ရှိတဲ့ Hill Avenue Book Co. စာအုပ်ဆိုင်ထဲက ထိုင်ခုံလေးတွေ စီချထားတဲ့ နေရာလေးဟာ အသံလုံ အခန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ခန်းခန်းနားနားလည်း သိပ်မရှိလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တက်ရောက်လာကြတဲ့ ပရိသတ်ဟာ စည်းကမ်းတကျ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လှပါတယ်။ ရွတ်ဖတ်သမျှ စာတွေကို အသေအချာ နားစွင့်ပြီး တလေးတစား နားထောင်ကြပုံဟာ စာရေးဆရာတွေအဖို့ တကယ့်ကို အားတက်စရာပါ။ အဲဒီနေ့က ကျွန်မရဲ့ ကဗျာ၂ ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “ဟစ်တလာနဲ့ ချေဂွေဗားရား ဘီယာဘားမှာ စကားစမြည်ပြောကြတယ်” နဲ့ “မြို့ပြသူလေးနဲ့ တစ်ညနေ” တို့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တွေ ကို ရွတ်ခဲ့ပါတယ်။
(စာပေရွတ်ပွဲအတွက် ကြော်ငြာထားတဲ့ ပိုစတာ)
(စပစ်ရစ်လိပ်ခ်မြို့ စာအုပ်ဆိုင်ထဲက စာပေရွတ်ပွဲကို တက်ရောက်လာကြသူအချို့)
(စပစ်ရစ်လိပ်ခ်မြို့ စာအုပ်ဆိုင်ထဲက စာပေရွတ်ပွဲမှာ ပန်ဒိုရာ ကဗျာရွတ်နေစဉ်)
ဒီနေရာမှာ ကဗျာဆရာမလေး တီဂျေဒီးမားအကြောင်း နည်းနည်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ သူဟာ အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်သာရှိသေးပေမယ့် ကဗျာနဲ့ပတ်သက်ရင် သူ့နိုင်ငံမှာ ဦးဆောင်ဦးရွက် လုပ်ဆောင်နေသူပါ။ သူက spoken poetry ဆိုတဲ့ စကားပြောကဗျာကို အထူး အလေးပေး လုပ်ဆောင်နေသူပါ။ ကျွန်မနဲ့သူဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံတွေ အကြောင်းရော ကဗျာအကြောင်းကိုပါ မကြာခဏ စကားပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ သူဟာ ကဗျာကို စာရွက်မကြည့်ပဲ အလွတ်ရွတ်ဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ ဘော့စဝါနာရဲ့ ကဗျာဟာ စကားပြော ဘာသာစကားနဲ့ အသံကို အခြေခံတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက်ကိုင်ပြုထားပြီး အသံကို အားပြုပြီး ရွတ်သူပါ။ သူ့ရဲ့ အလွန်ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ကဗျာရွတ်ဆိုမှုကို အဲဒီပွဲမှာ ကျွန်မ ပထမဆုံး မြင်ဖူး ကြားဖူးခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီခရီးစဉ်ဟာ ဂျိုးရဲ့ ဇာတိမြို့ဖြစ်တာကြောင့် အစီအစဉ်တွေ ချိတ်ဆက်ထားတာ အဆင်ပြေလှပါတယ်။ ဂျိုးရဲ့ အမျိုးတွေ အကုန်လုံးက ကျွန်မတို့ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဖော်ဖော်ရွေရွေ ကူညီကြပါတယ်။ ရှေ့မှာ ပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ဂျိုးရဲ့အမေက ညစာကျွေးခဲ့တယ်။ ဂျိုးရဲ့ အဖေကတော့ တည်းခိုဖို့ ဘန်ဂလို ရအောင် စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂျိုးရဲ့ အဒေါ် က မော်တော်ဘုတ် တစ်စီးနဲ့ ရောက်လာပြီး ကျွန်မတို့ကို ကန်ထဲမှာ လိုက်ပြပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ကောင်းကင်ဟာ ပြာနှမ်းနေပြီး တိမ်တွေအဆုပ်ဆုပ်နဲ့ သိပ်ကို သာယာလှပပါတယ်။ လေတဖြူးဖြူးနဲ့ လှေစီးနေရင်း အမိမြေက အင်းလေးကန်ကိုလည်း သတိရမိပါတယ်။
(ဂျိုးရဲ့ အဒေါ်က အဲဒီ မော်တော်ဘုတ်နဲ့ လာခေါ်ခဲ့ပါတယ်။)
(Spirit Lake ရေကန်မြင်ကွင်း)
( လှေပေါ်မှာ ထိုင်နေကြတဲ့ ဘော့စဝါနာက တီဂျေ၊ အီရတ်က ဂူလာလာနဲ့ IWP ရုံးဝန်ထမ်း အမ်မလီ)
ဒီဒေသဟာ အိုင်အိုဝါရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အပန်းဖြေနေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်အိုဝါပြည်နယ်ရဲ့ ဒစ်ကင်ဆင် နယ်မြေ (Dickinson County) မှာ ရှိတဲ့ Spirit Lake, West Okoboji and East Okoboji ရေကန်အစုအဝေးကို Iowa Great Lakes လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒေသတစ်ခုလည်း ခြုံပြီး Okoboji လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ Spirit Lake က အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ၂၃ စတုရန်းမီတာ ကျယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲဒီလို ရေကန်ထဲမှာ လျှောက်လည်ရတာ အမေရိကကိုရောက်မှ ဒါဟာ ဒုတိယအကြိမ်ပါ။
အိုင်အိုဝါမြို့ကို ရောက်ပြီး တစ်ပတ်လောက်အကြာတုန်းက တနင်္ဂနွေတစ်နေ့မှာလည်း မြို့အနီးအနားက Lake Macbride ရေကန်ကို IWP ရုံးအဖွဲ့က လိုက်ပို့ကြပါသေးတယ်။ အဲဒီရေကန်ထဲမှာတော့ လူ ၄ ယောက် စီးလို့ရတဲ့ ခြေနင်းလှော်ရတဲ့ လှေကလေးမှာ အီရတ်က ဂူလာလာ၊ အီရန်က ယာကုဘ်၊ နေဘုန်းလတ်နဲ့ ကျွန်မတို့ လျှောက်စီးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကန်အနီးတဝိုက်က တောအုပ်ကလေးမှာလည်း လမ်းလျှောက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ အပြန်မှာ Wilson’s Apple Orchard ပန်းသီးခြံကို လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ ပန်းသီးခြံထဲမှာ Bessie လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ လယ်ထွန်စက်ကားကြီးကို စီးပြီး ပန်းသီးပင်တွေ ရွှေဖယုံခင်းတွေကို လျှောက်ကြည့်ဖြစ်ကြပါတယ်။
(Lake Macbride ရေကန်ဘေးမှာ ထိုင်ရင်း စကားပြောနေကြတဲ့ IWP စာရေးဆရာတွေ)
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဖွံ့ဖြိုးအတိုးတက်ဆုံး နိုင်ငံကြီးတစ်ခုကို ရောက်နေတဲ့အခိုက်မှာ အခုလို သူတို့ရဲ့ ကျေးလက် နယ်ဒေသတွေကို သွားရောက် လေ့လာခွင့်ရတာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်လို့ ကျွန်မကတော့ မှတ်ယူပါတယ်။ အိုင်အိုဝါမြို့ အနီးအနားက ပရေရီမြက်ခင်းပြင် ရှိရာဒေသက ကျေးလက်အိမ်တစ်အိမ်ကိုလည်း IWP အစီအစဉ်နဲ့ သွားလည်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့အပြင် ယာခင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ ဂူလာလာရဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ဖိတ်ခေါ်ကျွေးမွေးလို့လည်း ပိတ်ရက်တစ်ရက်မှာ ဂူလာလာနဲ့ အတူကပ်လိုက်ပြီး ရောက်ဖူးခဲ့ပါသေးတယ်။
၂၀၁၃ ဂျွန်လ စတိုင်သစ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြပြီး။
Posted by pandora at 2:56 PM
creative writing သင်တန်းလေးကို သဘောကျတယ် ပန်ပန်ရေ ...
ကလေးတွေရဲ့ သင်တန်းလေးက ကောင်းလိုက်တာ။ မြန်မာပြည်မှာလည်း အဲဒီလို လုပ်နိုင်ရင် ကောင်းမှာပါ။ Des moines မှာ မြန်မာတွေ မတွေ့ခဲ့ဘူးလား။
ငြိမ်းချမ်းရေးက သင့်ကုပ်ပိုးကို ခွစီးနေ